Ònye pụrụ Nyere Me weghachite Data si Adata Flash Drive?
Hi, m nwere ihe Adata c802 8GB USB flash mbanye, nsogbu malitere mgbe wepụ faịlụ ka m anọghị n'oche m n'elu. N'oge na mwepụ, na kọmputa mechie anya na a na mberede. Mgbe m reboot kọmputa, m ghọtara na ọ bụghị ihe niile ọdịnaya na e wepụrụ m oche top, ma flash mbanye tọgbọ chakoo. Ihe karịrị ọkara nke m faịlụ na-arahụ. Biko na-atụ aro a m ụzọ iji weghachite data si Adata flash mbanye. Ezi echiche.
Na nke a, m ga-ekwe nkwa na ị na gị nwere ike omume naghachi data si Adata flash mbanye. Lee, m na-eji obi umeala na-atụ aro Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac maka gị. A mmemme a na-enye aka ngwá ọrụ iji weghachite data si Adata flash mbanye, n'agbanyeghị na data na-efu n'ihi usoro njehie, na-ezighị ezi na mwepụ, ma ọ bụ na mberede nhichapụ. Ọ bụ ike nke na-agbake data dị ka akwụkwọ, foto, audios, videos, Archives, wdg E wezụga, ma ọ bụrụ na-enye gị a ikpe mbipute n'ihi na ị na iṅomi Adata USB flash mbanye tupu ịzụta maka mgbake.
Igosi Adata Flash Drive Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Tupu mgbake, hụ na gị na Adata flash mbanye nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a Iweghachite ọnọdụ
Mgbe launching Wondershare Data Recovery, usoro ihe omume interface ga-egosipụta 3 mgbake ụdịdị na a "Wubàtá Iweghachite" nhọrọ. The atọ mgbake ụdịdị na-"Echefuola File Iweghachite", "nkebi Iweghachite" na "Raw Iweghachite".
Nọmalị i nwere ike ịgbalị "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ. Ọ bụrụ na a mode adịghị aka, ị nwere ike ndị ọzọ na abụọ ụdịdị mgbe ahụ.
Cheta na: Nke a ndu dabeere na Windows version nke Wondershare Data Recovery usoro. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị pụrụ ịgbaso yiri ntụziaka na Mac version.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Adata USB Flash Drive
Nke a nzọụkwụ bụ nnọọ mfe. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ ike mbanye n'ihi na gị Adata USB flash mbanye na pịa "Malite" na-amalite iṅomi.
Nzọụkwụ 3 Naghachi Data si Adata Flash Drive
The hụrụ faịlụ ga-gosiri na edemede ma ọ bụ ụzọ mgbe scanning. Ị nwere ike ịlele ma faịlụ ị chọrọ iji naghachi a hụrụ ma ọ bụ na ha na mbụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara ndị faịlụ ị na-aga iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị. Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ gị Adata USB flash mbanye mgbe mgbake, iji zere ime ka data overwriting.
> Resource> Flash Drive> Adata Flash Drive Iweghachite: Olee naghachi Data si Adata Flash Drive